नहारेको मान्छे- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १६, २०७५ गुरुङ सुशान्त
काठमाडौँ — ‘युद्ध जित्नकै लागियदि हतियार उठाएको भए तिमीलेजाऊ एकपल्टयोद्धाहरूको चिहानमार सुन रातको सुनसानमात्यहाँ गुन्जिएको मौनता  । ’
यी हरफका कवि विप्लव प्रतीकको यात्रा कुन दर्शनले हाँकेको होला ? कविता जन्मिनुका पृष्ठकथा के होलान् ? सामान्यतः हामी यस्ता प्रश्नबारे कमै सोच्छौं ।
पहिरन र रूपरंग देखेर धेरैले विप्लव प्रतीकलाई साधु–सन्त भन्छन् । लामो सफेद कपालकै कारण कतिपयले उनलाई जोगी देख्छन् । तर, उनको कायिक मात्रै होइन, काव्यिक हुलियासमेत छुट्टो छ ।
९० को दशकमा प्रहरीले कपाल पाल्ने युवाहरूलाई समातेर फोकटमै टाउकामाथि कैंची चलाउँथ्यो । अपमानपूर्ण यस्तै हर्कतसँग झोँक चलेर विप्लव पनि लामो जुल्फी हल्लाउँदै पुलिसको नजिक–नजिक जान्थे । प्रहरीसँग झगडै गर्न कपाल पालेका थिएनन् तर अनुभव बटुल्नु थियो उनलाई । अपमानबोधपछिको प्रतिक्रिया/कवित्वको स्वरूप जाँच्न र आक्रोशलाई कवितामा ढाल्ने सीप अभ्यास गर्न यसो गर्थे । कपाल पाल्ने आफ्नो आदतलाई महिलाप्रतिको सम्मानका रूपमा ग्रहण गर्दै गए उनले । केशविन्यास र भान्छाको हिज्जेमा आफूलाई अभ्यस्त राख्दा आफूमा संवेदनशीलताको लय थपिएको महसुस गर्छन् उनी ।
विवाहलाई एउटा संस्था मान्ने हो भने त्यसको सदस्यता खारेज भएको निकै वर्ष भइसक्यो । साँच्चै भन्ने हो भने एकल गृहस्थीमा यत्ति धुनमग्न भए, वर्ष–संवत्को हेक्कासमेत छैन विप्लवलाई । सायद क्यालेन्डरका पुराना पाना पल्टाउन चाहँदैनन् । उनलाई लाग्छ, विगतका कतिपय भावनात्मक उडानमा परिपक्वता थिएन । सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन नसक्नुमा आफ्नै दोष बढी देख्छन् । आफूले टेकेका ठाउँमा असफलता मात्रै हात लाग्दाका ती निराशापूर्ण र अप्ठ्यारा समयमा उनले नजिकको मान्छेसामु आँसु लुकाए । ‘बहादुर’ हुने सांस्कृतिक भ्रमको सिकार भए । आर्थिक अभाव र असमझदारीको चेपुवामा दुई प्राणी लामो समय सँगै रहिरहन मुस्किल नै थियो । वैयक्तिक अहम्को टसलसँगै आफ्नो भयंकर रिसाहा भूतपूर्व स्वभाव पनि जिम्मेवार देख्छन् उनी । कहिलेकाहीँ उनी सोच्छन्, ‘प्रकृतिले नै मानव जातिलार्ई अलगअलग जन्माएको छ तर हामीले विवाहको नाउँमा सम्झौता या शोषण गरिरहेका छौँ ।’ कवि कल्पना नै सही, यो संरचना एक दिन भत्किन्छ । तर, नभत्किउन्जेल वैवाहिक सुख लिने सूत्र पनि कविसँग छ— परिपक्वतासहित परस्पर आदर, विश्वास र उन्नतिका लागि भरपूर साथ–सहयोग ।
कसैलाई पाउनु र लिनु मात्रै प्रेम होइन, बरु दिनुचाहिँ प्रेम हो कि ! विप्लव ‘सोलमेट’ को परिकल्पनाचाहिँ गर्छन्, जसमा त्याग, करुणा, स्वतन्त्रताजस्ता सकारात्मक भाव मात्र आऊन्् । जसलाई केही दिँदा पनि दिइरहेको अनुभूति नहोओस् । प्रेमका मिथकहरूमा उति चासो र विश्वास नराख्ने विप्लवका लागि आफ्नै भोगाइ उत्तम पाठशाला हो । उनको खोज सिमोन द वउवा र अमृता प्रीतमजस्ता बौद्धिक नारी हुन् । के विप्लवले त्यस्ता प्रेमिका भेटेनन् ? या सार्त्र र इमरोज हुने आँट गरेनन् ? कवि हृदय कहिलेकाहीँ भ्रममा परिहाल्छ, ‘सायद भेटियो, सायद भेटिएन ।’ मीठो भ्रमहरूको समुच्चयले जीवनलाई आसलाग्दो बनाउँछ ।
मलाई डर छ
कतै कसैले मलाई प्रेम त गर्दै छैन ?
कतै कसैले मलाई
रूख त बनाउँदै छैन ?
खासमा आफूमाथि शासन गर्ने नारी चाहन्थे विप्लव । शासनलाई यहाँ प्रचलित अर्थमा लिइयो भने एक कविमाथि अन्याय हुन जान्छ । यस्तो प्रेमिका होओस्, जसले हैकम जमाउनेभन्दा अज्ञानतालाई भत्काउँदै ज्ञानको गुँडतिर लैजाओस् ।
बजारमा प्रतीक ‘बदनाम’ पनि छन्— युवती र रक्सीका मामिलामा । तर, हल्लाको बोट चढेर ट्याग भिराउनेहरूसँग पुर्पक्ष गर्ने जाँगर छैन उनीसँग । संकटका घडीमा आत्महत्या गरूँजस्तो आवेग पनि नआएको होइन उनमा । तर, त्यस्तो आवेग प्रतीक पन्छाइहाल्थे । सोच्थे— स्वेच्छाले म जन्मेको होइन भने बलजफ्ती किन मर्ने ? कसैको प्रेममा व्यथित हुने संघारबाट उनी बाहिरिसकेका छन् । भलै त्यो कष्टसाध्य चरण थियो ।
कविकै दाबीलाई पत्याउने हो भने उनी अहिलेसम्म अँध्यारामा छन्— संसारका सबै धर्मग्रन्थ जलाएर विवेकको मार्गमा डोर्‍याउने मान्छेको खाँचो छ उनलाई । त्यस्तो मान्छे, जसले प्रकाशतिर लैजाओस् । त्यस्तो प्रेमको प्रभुत्व–पट्टा गलामा लगाएर हिँडिरहन मञ्जुर छन् प्रतीक । उनका स्वीकारोक्तिबाट अनुमान गर्न कठिन छैन— विप्लव निरन्तर प्रेममा छन् । लड्नु र उठ्नुको अगणित सफर हेर्दा भनिदिन सकिन्छ— विप्लव प्रतीक अर्थात् नहारेको मान्छे ।
जिज्ञासा जाग्छ, भित्रको खालीपनले विप्लव प्रतीकलाई कता धकेल्दै छ ? स्वतन्त्रता या संकुचनतिर ? आफूले बुझेको सत्यको झिल्कोभन्दा पर अनेक सत्यको सम्मेलन देख्छन् उनी । कविको खालीपन निराशाको होइन, उज्यालोका स्रोतलाई आफूमा समाहित गर्ने भोक हो । त्यसैले हरदम प्रयत्नरत छन्, अरूको स्वतन्त्रतालाई खलबल नपार्न । सम्बन्धमा उत्तारचढाव प्राकृतिक मानिएला । तर, अविश्वासले भरिएको समाजमा समेत उनीसँग यस्ता असंख्य साथी छन्, जसले गल्तीहरू सच्याउन मद्दत गर्छन् र दुःखमा भरोसा दिन्छन् ।
प्रतीकका लागि अति जीवन्त सहर हो– काठमाडौँ । यही दयालु सहरमै नाभि गाडिएको छ उनको । यहीँ जन्मे–हुर्के–बढेकाले उनका लागि यो सहर चानचुने हुनै सक्दैन । उनीसँग घर हुनु र नहुनुको दुवै अनुभूति छन्— कहिले घर, कहिले डेरा । उनले उन्मुक्त हाँसोको फोहरा छुटाएका छन् यहीँ । रुने एकान्त खोज्दै हिँड्दा बाटोमै अविरल आँसु बगेको द्रवित डोब पनि यहीँका सडक–गल्लीमा छाडेका छन् । शिरीष फुल्ने याममा बैजनी गलैँचा ओच्छ्याएर निदाउने सुन्दर समयको नोल्टाल्जिया सकुशलै छ । अहिले त ‘वन–वे’ मा दुवैतर्फ चनाखा नजर लगाउँदै हिँड्नुपर्ने सहर भइसक्यो काठमाडौँ । पैदलयात्रुमैत्री सडक छैनन् यहाँ । सडकपेटीमा हर्न बजाउँदै कुद्छन् मोटरसाइकल । धेरैले सत्तोसराप गरे पनि उनका लागि यो सहरको हंस हराइसकेको छैन । भानुभक्तले ‘अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी’ लेख्नुपरेको यो सहर कला–सौन्दर्य र संस्कृतिको जीवन्त संग्रहालयजस्तो लाग्छ उनलाई । राज्यसिर्जित अव्यवस्था र विभेदप्रतिको आक्रोश उदार सहरमाथि पोख्नुचाहिँ शोभनीय लाग्दैन ।
समयले यात्रामा पखेटा जोडिदिएपछि उनले रुसी, पाकिस्तानी र अमेरिकी सहरका अनेक रंग–सोच–संस्कृतिका मानिसहरू भेटे । नेपालमै सिनेकर्मी भए, पत्रकार बने उनी । त्यसबाहेकका खुद्रा काम पनि गरे । अहिले लेखनबाहेक अरू उद्यममा छैनन् उनी । आज उनको सोच यत्ति छ, ‘अब कुनै योजनामा नचलूँ ।’ संरसंगतको फैलावटले उनको स्वभावमा कोमलता, हार्दिकता र उदारताको मात्रा बढाएको हुनुपर्छ ।
रफ्तारमा कुदे पनि कहीँ नपुग्नुको अनुभव प्रशस्तै छन् प्रतीकसँग । लाग्छ—अहिले पनि रफ्तारैमै छन् । तर, गन्तव्यलाई वास्ता गर्न छाडिसके । उनको बुझाइ छ— ‘कोही पनि कहीँ पुग्दैन । गन्तव्य र प्राप्ति पनि भ्रम मात्र हुन् ।’ विप्लवको जरा वामपन्थी वैचारिकीमा गाडिएको थियो । नाममै ‘सर्वहारा’ झुन्ड्याउने उनका बा किताब छाप्न घर बन्धकी राख्नसमेत पछि पर्थेनन् ।
आफ्ना रचनामा मार्क्सवादको प्रभाव कहीँ न कहीँ रहेको स्विकारे पनि ‘नाराबाजी’ को सोझो बाटो आफ्नो नभएको ठम्याइ छ उनको । तर, विनोदविक्रम केसी, स्वप्निल स्मृतिहरूले लेखिरहेका मुखर कवितालाई प्रेम र सम्मान गर्छन् । भनिन्छ, ‘झुट कविले सधैँ अरूको नाममा आफ्नो कुरा थोपर्छ, सच्चा कविले आफैँसँग कुरा गर्दासमेत दोस्रो व्यक्तिसँग संवाद गर्छ ।’ प्रतीकलाई पनि आत्मरतिमा रमाउने काव्यमा रस लाग्दैन । उनलाई वैयक्तिक भावमा पनि आफ्नो देशको संवेदना मिसियोस् लाग्छ । कवि हरेक विभेद, अन्याय र निर्दयी क्रियाकलापको विपक्षमा हुनुपर्छ भन्नेमा धेरैको सहमति छ । तर, चोट र ज्वरोमा भने कविता रच्न रुचिकर लाग्दैन प्रतीकलार्ईर् । तापमा रन्किने अध्याय सकेपछि आक्रोश र आक्षेपलाई पन्छाएर उनी विम्ब र रूपक बुन्न थाल्छन् । अमेरिका बसाइमा एक मित्रबाट उनले अपमान सहे कुनै बेला । त्यो चोट भुलाउन उनले दुई तीन महिनाको लामो यात्रा गरे । फर्किएर अन्तै कतै बसे । यो लम्बेतान प्रक्रियापछि बल्ल उनले शब्द फेला पारे–
‘मलाई मन छ
म भएको कसैलाई थाहै नहोस्
मलाई मन छ
म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्...।’
प्रतीकका अभिव्यक्ति न पूर्ण भौतिक लाग्छ, न त पूर्ण आध्यात्मिक । अज्ञेयको ‘हरेक क्रान्तिकारी पछि नियतिमा विश्वास गर्छन्’ भन्ने कथनमा ल्याप्चे लाउँछन् उनी । साथीभाइले चढेका गाडीमै उनले सन्तोष मानेका छन् किनकि आवश्यक पर्दा ती साधन हाजिर भएकै छन् । ब्रान्डेड ह्विस्की मात्रै पिउने संकल्प हरेक नयाँ वर्षमा गर्छन् नै । धरतीमा आइसकेपछि एकबारको जुनीमा कन्जुसी नगर्ने, महँगा चीज उपभोग गर्ने र स्वस्थ खाना खाने तर यसका लागि कोही कसैको चित्त दुखाउने । उनका तर्क र तरिकामा शास्त्रार्थ गर्नुपर्ने कुनै तुक छैन । आहारविहारको अनुशासनका कारण नै प्रतीकको स्वास्थ्य र चमक ठीकठाक देखिन्छ । उनलाई लाग्छ— मानसिक र शारीरिक तन्दरुस्तीको साइनो सिर्जनासँग हुन्छ । व्यायाम, सकभर अर्ग्यानिक खाना र आयुर्वेदिक चिकित्सा उनका स्वास्थ्य सूत्र हुन् ।
यात्रालाई उनको स्वभाव माने हुन्छ । कोही कसैको पुस्तक या जीवनीबाट प्रभावित भएर यो स्वभाव विकसित भएको होइन । हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय थिएटर महोत्सवपछि आराम गरिहेका प्रतीकलाई मण्डला थिएटरबाट राजन खतिवडाले फोनमा भनेछन्, ‘दाइ, जनकपुर जाऔँ ।’ साढे दुई बजे फोन उठाएका प्रतीक आधा घण्टापछि नै गाडी चढ्न टुप्लुक्क पुगेछन् बिनातयारी ।
संसारकै उत्तम संगीतको व्यसन छ प्रतीकमा । राम्रा गीतकार सूचीमा उनको गाढा नाम छँदै छ । उनलाई लाग्छ, ‘पाब्लो नेरुदा, माया एन्जेलो या वाल्ट हविट्म्यानले जस्तो कविता लेख्न पाउन पर्थ्यो । तर, हामी बाँचेको समाज प्रदूषित छ ।’
प्रश्नवाचक चिह्न त तेर्सिन्छ नै– के नेरुदाहरूका समाज स्वच्छ, सफा र हराभरा मात्रै थिए ? उनको दाबी छ, ‘मेरो कविताले सबभन्दा पहिले कविता हुनै संघर्ष गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रगतिशील भनिने मानिसहरूको सामन्ती चरित्रले मलाई भित्रभिक्रै खोत्रो बनाउँछ ।’ बाले उनलाई समाजमा रहेको विभेद चिन्ने दृष्टि दिए । आँखा चिम्लँदा समेत उत्पीडन र हिंसा देखिन्छन् यहाँ । त्यसले प्रतीकको एकान्तवास खोसिदिन्छ । कविता जोगाउनै मुस्किल हुनु सुखद होइन ।
निकै तामझामसहित उनको पहिलो उपन्यास ‘अविजित’ विमोचन भयो । तर गाडी चढ्ने लालसाले ‘उपन्यासगिरी’ लहसिएका होइनन् उनी । तीन–चार दशकअघि उनको डायरी हरायो, जसमा जतनले लेखिएका कथाहरू थिए । त्यसपछि भुलेर पनि गद्यलेखनमा चासो दिएका थिएनन् । अमेरिकामै उनले एउटा किताब पढे, जसमा दिवंगत पात्रहरूको मानमर्दन गरिएको थियो । सोचे, चरित्रहत्या गर्ने दस्तावेज भयो त्यो किताब । उनलाई उपन्यासबाट आफ्नो समयको कथा भन्नु थियो तर भ्रष्टीकरण नगरीकन । तर ‘अविजित’ पूर्ण इतिहास होइन, त्यहाँ भरपूर कवित्व पोखिएको छ ।
सिनेमा, संगीत, थिएटर, पेन्टिङ र प्रकृति उनका लागि शरणथलो हो । खलिल जिब्रान, हर्मन हेस्से, निकोलाई आस्त्रोवस्की, चेखब, बीपी कोइरालाहरूप्रति अगाध प्रेम छ उनको । नेपाली साहित्य पनि उस्तै आस्थाले पढ्छन् । तर, हाम्रो साहित्य डबलीमा विमर्शभन्दा धेरै ईर्ष्यावमन हुन्छ । प्रतीक भने कसैको डाहा गर्दैनन् । कसैलार्ई प्रतिद्वन्द्वी मानेर उछिन्ने लिगलिगे दौडमा विश्वास छैन उनलाई । बुझेका छन्– एउटा सिंगो समयको कथा भन्न हजारौँ लेखक–कलाकारको जरुरत पर्छ । एउटा व्यक्तिले सबै इतिहास रच्न र लेख्न सम्भव छैन । राजनीतिलाई थुकेर कुनै लेखक स्वच्छ हुन सक्दैन भन्ने हेक्का छ प्रतीकलाई ।
लेखकैपिच्छेका स्वभाव र शैली फरक हुन्छन् । तर उनी श्रद्धापूर्वक सम्झिरहन्छन्– हास्यचेतले परिपूर्ण अनि चिरिच्याट्ट भूपि र अराजक भएर मदिरा पिउने हरिभक्त कटुवाल । थुप्रै कविका काव्य र जीवनशैलीले साधनामा लाग्न प्रेरित गर्छन् । श्रम र पसिना चिनेको कविले अरूलाई सम्मान गर्न पनि जान्दछ भन्ने उदाहरण स्वयं प्रतीक हुन् ।
१६ वर्षको उमेरमा जब उनको परिवारमा विखण्डन आयो, तब विप्लवसँग काव्य फेरि ठोक्किन आइपुग्यो हठातै । सात/आठ वर्ष छँदै बाको करकापमा शब्दसंयोजन गर्न जानिसकेका थिए । उनका बाका साथी थिए— हरिभक्त कटुवाल, भूपि शेरचन, भवानी भिक्षु, भवानी घिमिरे आदि । आमा एकातिर र बा अर्कातिर भएपछि हुर्कंदो विप्लवको हृदय द्रवीभूत भयो । तर कविता लेख्न थालेपछि आफूलाई महान्कवि देख्न थाले । हितैषी शिशिर सुब्बाले उनलाई मेन्टिरिङ गरे । विप्लवका कतिपय कवितालाई गीतमा ढाल्न उनै सुब्बाले सुझाए । जीवन आचार्यले मलिलो हौसला दिए । बा कृष्णप्रसाद ‘सर्वहारा’ त उनका कविताको पहिलो पाठक र मार्गदर्शक भइगए, भलै छोराका भावुक कविताले ‘सर्वहारा’ लाई कहिल्यै छोएनन् । काव्य लेखनमा बिसौनी पनि आयो तर कविता अम्मल भइसकेकाले धेरै वर्ष सुस्ताउनै सकेनन् उनी ।
झन्डै ६ दशक जाडो–गर्मी झेलिसकेका यी मधुर कविलाई उमेर र जात सोध्नु अपमान गर्नु हो । उनीसँग ओठैमा उत्तर छ– ‘यो पृथ्वीजत्तिकै युवा छु र ब्रह्माण्डजत्ति नै बूढो ।’ नागरिकतामै विप्लव प्रतीक लेखाएका छन् । नामले पाएका ठक्करहरू उनको निबन्ध ‘ह्वाट इज इन अ नेम !’ मा प्रस्ट राखेका छन् । तर निबन्धको अन्तिम शब्द पढिसक्दासमेत उनको पुर्ख्यौली थर पत्तो लाग्दैन । यो लेखन–शिल्प मात्रै होइन, जातिवादी सोचप्रतिको भद्र विद्रोह पनि हो विप्लवको । प्रकाशित : चैत्र १६, २०७५ ११:३४
काठमाडौँ — मुलुकभर सञ्चालित शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठन–पाठनमा सुधार, हुनुपर्ने आवाज बुद्धिजीवीहरूले उठाउँदै आएका छन्  । मुलुकको प्राज्ञिक स्थल मानिएका विश्वविद्यालयहरूमा पटक–पटक हुने तालाबन्दी, हंगामा, तोडफोड लामो समयदेखि जग हँसाइको विषय बन्दै आएको छ  ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक अतिवादले थलिएका, कतिपय शिक्षक अध्यापनभन्दा नेताको झोला बोकेर स्वार्थसिद्धिमा तल्लिन हुने गरेका, विद्यालयको अवस्था नाजुक हुँदा पनि जिम्मेवार नदेखिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो ।
बिहीबार प्रकाशित ‘फेल भए शिक्षकलाई कारबाही’ खबर पढेपछि भने शिक्षाप्रेमीमाझ नौलो तरंग थपिएको हुनुपर्छ । संघीय संसद्को ८ सदस्यीय उपसमितिले पठन–पाठनमा शिक्षक सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुने ठहर गर्दै परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने, एसईईमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ भन्दा कम ग्रेड ल्याए प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्का एवं थप कारबाही हुनुपर्ने, तीन वर्षभन्दा बढी एउटै विषयमा विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याए सम्बन्धित विषयशिक्षकलाई सेवामुक्त गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकलाई पदबाट घटुवा गरिनुपर्ने, ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘ए’ र ‘ए प्लस’ ल्याए थप बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य शिक्षण अनुमतिपत्र लिई ५–५ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने, प्रधानाध्यापकलाई प्रत्येक ५ वर्षभित्र अन्य विद्यालयमा सरुवा गरिनुपर्ने, प्रत्येक शिक्षकलाई बेलाबखत छोटो अवधिको तालिम दिनुपर्ने, ३५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्नेजस्ता सरकारलाई दिएको सुझावलाई शिक्षा सुधारको नयाँ कदम मान्नुपर्छ । उपसमितिका अधिकांश सुझाव निजामती सेवा ऐनसँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । सुझाव हुबहु लागू भएमा सबै शिक्षक उत्साहित, जिम्मेवार र प्रतिस्पर्धी बन्न अग्रसर रहने, विद्यालयमा ‘टिम स्पिरिट’ को संस्कार अभिवृद्धि हुने आशा राख्न सकिन्छ । कुरूप राजनीतिले डढेलो लगाइसकेको, कोही कसैसँग नडराउने, अनुशासनहीन बन्ने, असन्तुष्टि पोख्न प्रधानाध्यापकको कठालो समात्न पनि पछि नपर्ने शैक्षिक बेथितिबीच नियम र आदर्शवादी सिद्धान्त लागू हुन सक्ला र ?
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७५ ११:३३